Posted by Kaung Kin Ko at 4:42 PM
ကဗျာလာ ဖတ်သွားပါတယ်နော်။ ကျွန်ဘ၀လို့ ခံစားနေရတဲ့ အဖြစ်ကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဒီဘ၀က မြန်မြန် လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်နော်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
a yan kaung par thi....bal lo pyaw ya mhan taung ma thi twat bu.....
အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါပဲ ကောင်းကင်။
ကိုကောင်းကင်ရေ...`ငါတို့ဘ၀နဲ့ မွှေးရမယ့်မီးတောက်´ နဲ့ `ကျွန်´ ... နှစ်ပုဒ်လုံးကို ကြိုက်တယ်။ `ကျွန်´ကိုဖတ်ပြီး သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေရတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ ဘ၀နဲ့ခံစားချက်တွေကို ပိုနားလည်လိုက်ရပါတယ်။ သေရင်မြေကြီးဖြစ်ဖို့ သေချာပေမယ့် ရှင်ရင်ရွှေထီးဆောင်းရဖို့ကတော့ ဝေးလွန်းနေတာ အမှန်ပဲနော်။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းတောင် နှိမ်ချင်မှတော့ သူများကကျွန်လို့ သဘောထားတော့မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူများဆီမှာ ကျွန်သွားခံတာက ပိုထမင်းဝဖို့ သေချာနေတော့လဲ.......။ ငှက်ကလေးတွေလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျံသန်းနိုင်ကြမယ့်တစ်နေ့ကို မြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့Blogကို ခုမှရောက်ဖြစ်တာ နှမျောတယ်။ ကိုယ့်အကျင့်အတိုင်း ခွင့်မတောင်းပဲLinkလိုက်မိပြီ။ လေးစားပါတယ် ကောင်းကင်ကို။ နောက်အမြဲရောက်ဖြစ်မှာ သေချာတယ်။
ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ကြိုက်တယ် အစ်ကိုကြီး ... အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ကျနော် အရောက်နောက်ကျလိုက်ပေမယ့် ကဗျာကောင်းတပုဒ်ကိုတော့ လက်မလွှတ်လိုက်ရဘဲ ဖတ်ခွင့် ရလိုက်သလိုပါပဲ။ တော်တော်လေးကို ရသလဲမြောက်သလို ခံစားချက်တွေ အထင်းသားပေါ်လွင်လွန်း၊ ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ ကဗျာပါပဲဗျာ။
တို့ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာ မလွှဲပါ.....
အရမ်းကောင်းတဲ့ အရေးအဖွဲ့ဗျာ တကယ်ပါ။ အားကျတယ်ဗျို့။ သရုပ်ဖော်ထားတာ ထ်ိတယ် ။ ကျနော်တို့ဟာ သခင်ဘ၀ကိုရော ရောက်ခဲ့ဘူးကြလို့လားဗျာ ။
ကျွန် တွေရဲ့ဘ၀ကို မျက်စိထဲကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ကိုမြင်လာတယ်။ အပေါ်ယံဘ၀တင်မကဘူး စိတ်ထဲက ခံစားချက်ကိုပါ ပေါ်လွင်အောင်ဖွဲ့ဆိုထားတာပဲ။ အရမ်းကောင်းတာပဲ။ အားပေးနေတယ်နော်။
woo!! i like very much.
ကျွန်ဆိုတဲ့စကားကို မုန်းလွန်းလို. ကျနော့် ကဗျာတွေ စာတွေထဲမှာ ဘယ်တော့မှ `ကျွန်တော်` လို. မသုံးခဲ့ဘူး။ အရမ်းကောင်းတဲ့ကဗျာလေးပါ ကိုကောင်း။
I like ur poem very much.
I like yours. But since we can't run our own biz, we're servant. GOv servant ? COmpany servant ? all are same. we're kind of servant.
Not only in Myanmar but others too. :)
Keep it up ! bro
ဒီ ကဗျာလေးကို အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ
ခံစားချက်တွေ ပြည့်နေလို့လည်း ဖြစ်မယ်
စကားလုံး အထားအသိုတွေ အရမ်းမိုက်တယ်
ရိုးသားစွာဝန်ခံရရင်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ခြေခြာချန်ခဲ့တယ်လို့ ဖြစ်သွားမှာ...
လွန်စွာမှစိုးရိမ်မိပါသည်.။ကိုယ်ကအသစ်ဆိုတော့ ပိုပြီးဝန်လေးပါသည်။ဒီနေ့တော့ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကော်နက်ရှင်မှာပဲ ကျွန်ကဗျာကိုနောက်တစ်ကြိမ်ဖွင့်နားထောင်ပြီး လွန်စွာလေးစားအားကျမိကြောင်း ပြောခဲ့ပါသည်..။
ဒီစကားက အဝေးရောက် သားသမီးတွေအတွက်တော့ အမေ့ကို ပိုလွမ်းမိတယ်။ ခလုတ်ကလေးထိရင်တောင် အမေ့ကိုပဲ တခဲ့မိပါတယ် အကိုရေ။
ဟိုးတုန်းက ကျွန်ဘဝကလွှတ်ဖို့ နယ်ချဲ့တွေကို တစ်မျိုးသားလုံး သူနေရာနဲ့သူ စည်းစည်းလုံးလုံး တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတယ် ဆိုရင် ခုလည်းတစ်မျိုးသားလုံး
အဲ့ဒိအပိုဒ်လေးက ကျွန်တော့ ဘ၀လေးလိုပါပဲ အစ်ကိုရာ၊၊
လမင်း ထိန်ထိန်သာနေတာ ညချမ်းလေးတဲ့ သီချင်းလေးတွေမှာ ကြားခဲ့ဘူးပါတရ်ဗျာ၊၊
လျှောက်ခဲ့ရတဲ့ တစ်လမ်းလုံး မိုးရေတွေဆိုထားလို့အရမ်းကိုချမ်းခဲ့ရလို့ ညချမ်းကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါဗျာ၊၊
ရာဘာတောကြီးနဲ့ လမိုက်တဲ့ညကို ကျွန်တော် အရမ်းမုန်းသွားပြီ၊၊
ကျွန်နော့ဘ၀မှာ နောက်ဘယ်တော့မှ ပြန်မရောက်ချင်တော့တဲ့ နေရာက အစ်ကိုပြောတဲ့ အဲ့ဒိရာဘာတောကြီးလေ၊၊
ခါးကြားမှာ သေနှပ် ကြီးတွေနဲ့သူတို့ ကို တစ်ချို့ မြန်မာဆိုတဲ့ သူတွေကပြောတာ ရှမ်းတွေတဲ့ ၊၊
ကျွန်တော် သိပါတရ် သူတို့ က ထိုင်းတွေပါ၊၊
ကျွန်နော်တို့ ရဲ့ ညီရင်းအစ်ကို ရှမ်းတွေမဟုတ်ပါဘူး၊၊
ကျွန်တော်တို့ အဘိူးတွေ အခွံကြီးအတိုင်း ချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့ အပြန်လမ်းကြီကို ကျွန်တော်တို့ က ရွှေလမ်းကြီးအဖြစ်နဲ့ လျှောက်ခဲ့ရတာ၊၊
အချို့ အတွက်တော့သေလမ်းကြီးတောင် ဖြစ်ခဲ့ရတရ်နော်၊၊
ကိုယ့်အိမ်မှာ ပိုပြီးရှားပါးနေလို့ လား၊၊
ကျွန်တော်တို့ရွှေနိုင်ငံကြီးဆို...?
ဘယ်တွေရောက် ကုန်လို့ လည်း...?
ကဗျာ ဆရာကောင်းတစ်ယောက် မို့သမိုင်းတွင် ဦးမဲ့
ကောင်းကင်ကို ပါပဲ -- အမတော့ယုံကြည်တယ် ဒီအတွေးတွေ ကို လူတွေ ခံစားမိအောင် လူတွေရဲ့ နှလုံး
အိမ်တွေ ကို ထိခိုက်ခံစားရအောင် ရေးဖွဲ့ နိုင်သူဟာ သာမာန် ကလောင် အစွမ်းတော့ မဟုတ်ဘူး
ဒါ့ ကြောင့် အင်မတန် မှ ကောင်းကင်ကို ကို လေးစားပါနယ်
Dear Saung Yune La,
wat do u mean by we work under less educated ppl? u need to ask urselves, do u have the right attitude to work above them?
ရင်ဘတ်ထဲကို တဲ့တဲ့မှန်လို့ မျက်ရည်ဝဲရတယ်။
အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ထက်ပို ပြောလို့ရရင် ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီလိုကဗျာမျိုးကိုရေးတဲ့ လူကိုလဲ အရမ်းလေးစားမိတယ်။
you are great poet . i like most of your poem. thank u .
ကဗျာတွေကို ချစ်တဲ့ ကျွန်တော့် အတွက် လာလည်စရာ Site တစ်ခု အဖြစ် Link ချိတ်ထားလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား ...။
ချောကလက်မြို့က ကွန်မင်းနဲ့ပါတ်သက်လို့ ဆောရီးပါ ကောင်းကင်ကို ကျမလည်း နည်းနည်းသုတနည်းသွားလို့ပါ။ ကျွန် (သို့) မြန်မာအလုပ်သမားများလို့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အကုန်လုံးသိမ်းကျုံးပါသွားတယ်လို့ ခံစားမိလို့ပါ။ ဒီကွန်မင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်း ကျမကိုလှမ်းပြောပါတယ် ဒီလိုအဖြစ်တွေက ကျမအတွက်မရှိပေမယ့် တချို့တွေမှာ တကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့။ ပို့စ်တင်သူကလည်း အော်ရီဂျင်နယ် ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာလေးတော့ ထည့်ရေးထားဖို့ကောင်းတယ်နော်။ ကျမတောင်တလောက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တစ်ယောက်လာတင်ထားတဲ့ ကောင်းကင်ကိုရဲ့ ကဗျာလေးတွေ တွေ့လိုက်ရသေးတယ် ဘလော့ကို ယူထားပြီး ဖေးဘရိတ်မှာ သိမ်းထားသေးတာ အားတဲ့နေ့များဖတ်ရအောင်လို့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ကျွန် ဘ၀ကို တော်တော်ပေါ်လွင်စေတာပဲဗျာ... ကျနော်လည်း ကျွန်ဘ၀ ကမတတ်သေးပါဘူးဗျာ..
This is the truth of current days. I am impressed by your poem. Thanks.
Soe Min Naing said...